Umfazi waseGemini-Iimpawu zeZodiac kunye noBuntu ngothando, ukuhambelana kunye nobomi! - Iimpawu Zezodiac
Umfazi waseGemini Iimpawu zakhe kunye noBuntu bothando, ukuhambelana kunye nobomi
Ngaba oku kuvakala njengowesifazane owela kuye kwaye ukhawuleze? Emva koko unayo into embi ngeGemini, kwaye ulapho esihogweni esinye sokukhwela… oko kunjalo ngendlela elungileyo! Umfazi waseGemini unesibonakaliso se-zodiac esibonisa ubumbano. Ingumbono obonisa ukuba ngubani lo mfazi uthandekayo ngokubhekisele kubuntu. Unobukrelekrele kwaye unesibindi, uyasendle kwaye ulawulwa, kwaye unokutshintsha ukusuka kwelinye ukuya kwelinye ngokugqithileyo kwimillisecond okanye ngaphantsi! Ngokukhawuleza iGemini Gal yakho inokutshintsha iingcinga zayo, izicwangciso, okanye ingqondo!
Ke, ngaba ukulungele umfazi onomdla kwaye onobuqili okanye ababini? Kuya kubonakala ngathi uthandana nabafazi ababini abohlukeneyo, ngakumbi xa udibana neGemini ethandekayo, ekrelekrele!
Masijongane nayo; okokuqala udibana naye ngobuntu bakhe obonwabileyo, uvuyo kunye nesipho sakhe samazwi, uwe kuye. Unobulumko emehlweni ngaphaya kweminyaka yakhe, ebonakala ngathi ifuna imbeko. Konke ngephanyazo, ufana nomntwana othanda ukudlala. Ubume bayo bomoya bumenza ukuba aliphonononge lonke ilizwe nge-lens yokumangalisa kunye neliso elinomdla. Kulapha uhlala emxholweni wakhe, 'NDICINGA.'
Itheyibhile yomfazi waseGemini
Ukutsala njani uMfazi waseGemini
Ukuthandana noMfazi waseGemini
Iplanethi iMercury ilawula ngaphezulu kwabasetyhini baseGemini, kwaye eli qela leenkwenkwezi lihambelana nezithixo ezininzi zobudoda kwiinkcubeko ezininzi kunye neepheheon. KwiYiputa yamandulo, iplanethi ihambelana nesithixo esingumlinganiso uHermes Trismegistus, eyindibanisela yothixo wamaGrike uHermes nothixo wase-Thoth wase-Egypt. Ilizwi ' I-Trismegistus kuthetha, kathathu kakhulu. Unokubona nezalathiso zobuthixo ezinje Imercury ezintathu ezinkulu , IMercury okanye uEnoki: Zonke iiHermes ekubhekiswa kuzo, uthixo wezithunywa, umxhasi wabarhwebi, kunye nalowo ulawula yonke imida.
Ukujonga kwelinye i icon emele uphawu lwe-Sun lweGemini kwaye kuyacaca ukuba iGemini Woman yenye eya kuthi icacise imida yayo yobuqu ngokucacileyo. Kodwa, ukwanguye oya kutyhala imida ukuya kumda opheleleyo ukuze ubone ukuba angaya phi. Iimpawu zabasetyhini beGemini zibandakanya ukuguquguquka okumangalisayo, ukukwazi ukuhambelana kunye nokuguqula.
Ungumphathi wonxibelelwano: Nawuphi na umntu odibana naye kunokwenzeka ukuba achukunyiswe bubuciko bakhe obumangalisayo. Iindawo ezongezelelekileyo apho iMercury iphosa khona ifuthe layo kubandakanya iminyango, ukuhamba, abathengisi, ishishini, ukwazi, isayensi, kunye nendlela iGemini gal yakho ecinga ngayo. Imercury inefuthe kwingqondo kwaye igqithise ubulumko obunzulu kunye nefilosofi yokucinga kwabo ibachaphazelayo.
Umfazi waseGemini othandweni naseBhedini
Xa kuziwa kuthando nakwezesini, umntu wasetyhini waseGemini ngoyena mzekelo wento ethethwa kukuzenzekela. Uthanda i-adventure kunye nothando konke kuxubeke kwinto enye, kwaye ukuba ubudlelwane buyasilela kwintlantsi edlamkileyo okanye naluphi na uhlobo lokungakhathali, uyakubhabha ehokweni.
Amaqabane anokuthi afumane ubudlelwane kunye nomfazi waseGemini uya kuphelela ekonakaleni: Akanabanini, angabanjwa, abenakho, okanye aqeqeshwe. Kuya kufuneka umamkele, izihlobo zakhe, usapho, kunye nayo nayiphi na into ekuza nayo. Cinga olu nxibelelwano njengehakhi, umgca kunye nesinki! Xa uwela umfazi waseGemini, uyayithanda YONKE into ngaye, nokuba yeyiphi na edityaniswe ngokusondeleyo njengoko ebona ezi zinto njengokwandiswa kwakhe!
Abafazi baseGemini abayonto yokuhlala ixesha elide endaweni enye ukuba uhlala naye yenza izicwangciso zokuhamba. OKUNINZI. Ukuhamba kuya kugcwalisa isidingo sakhe somoya kunye nokuhamba ngenqwelomoya, kwaye ukusinda kancinci kwinyani kuya kuzanelisa umnqweno wakhe wokuqhubeka nokuzonwabisa. Ukuba awukhuselekanga nangayiphi na indlela, beka onke amathandabuzo ecaleni ngoku. Ukungazithembi yingxaki nje elindele ukuba yenzeke, uwe komnye wabasetyhini ekuhlaleni kuzo zonke izodiac.
Awunakuba nomona ngalo lonke ixesha umbona enxibelelana nomnye umntu… yifomula yobudenge ngokuqinisekileyo! Ungakhathazeki ukuba inenekazi lakho laseGemini libuyisa ukuthanda kwakho nguwe kunye naye wedwa. Uhlala ethembekile. Xa umfazi waseGemini efumana lowo ebemfuna ubomi bakhe bonke: Lowo unokuthimba ingqondo yakhe, athabathe intliziyo yakhe, kwaye azalise umphefumlo wakhe ngovuyo, unamehlo kuphela kuloo mntu.
Ubomi obuphilayo ngokuzeleyo: Yiloo nto malunga nomfazi ozelwe phantsi komqondiso weGemini! Uya kukuthatha kunye nokukhwela kunye nokuzonwabisa kunye naye, oko kubonelelwe ukuba unesibindi kunye namandla okugcina naye! Ekuqaleni, unokuba nengxaki yokugcina njengomfazi waseGemini. Akaze alinde ixesha elide ukwenza enye into okanye ukufumana enye.
Ubomi bufutshane, ixesha liyadlula, kwaye owasetyhini waseGemini uphila ubomi bokukhawulwa okungapheliyo kwewotshi entlokweni yakhe. Unokumjonga kwaye umbone esenza ngathi libhabhathane. Ingathi usuka kwenye intyatyambo ethandekayo esiya kwenye. Abanye abangakhangeliyo kwiiglasi ezinemibala ebomvu bathandana banokumjonga ngokungxama, ukungabi namonde, nokubaleka umvundla omhlophe eLewis Carroll kaAlice eWonderland! Nokuba yeyiphi na ilensi yokujonga ojonga kuyo umfazi waseGemini, eyona nto iqaphelekayo kukufuna ukwazi okungapheliyo: Olu luvo lufakwe kwisaci sakhe: 'NDICINGA.'
Thetha kwaye uthethe kwaye uthethe ngakumbi… uya kufumana iincoko ezinzulu kulo mfazi uliciko. Uyakuthanda ukusebenzisana nabanye, kwaye uyakuvuyela ukukhokela phantse kuyo yonke incoko. Ukuba uphumile kwibhalansi ngamandla akhe, unokurhoxa kwincoko.
Usenokuthetha ngokungathi uthetha nawe kunokuba athethe nawe. Uya kuwazi njani umahluko? Ndonwabe kakhulu ukuba ubuzile: Uyakukwazi xa incoko ibonakala iyenye indlela nabanye okanye amagama kunye neengcinga zakhe zibonakala njengekuphela kwento enomthwalo okanye yokungenisa. Abafazi baseGemini ngabantu abathanda ukufumana lonke ubomi obuboniswayo. Imotto yomfazi waseGemini, 'ndiyacinga,' inabo ekuqhubekekeni kolwazi, nokuba yindawo yokufunda okanye kwibala lobomi.
Uyonwabile ngokwaneleyo ukuba angazuza ulwazi, nasesikolweni seenkqonkqo ezinzima. Nokuba yeyiphi indlela, xa uthetha noMfazi waseGemini, uya 'kuthetha ulwimi lwakho.' Ngamanye amagama, uya kukwenza uzive ukhululekile xa uncokola naye. Ngoba? Ungukumkanikazi wabancokolayo!
Into ekufuneka uyenzile kukumvumela ukuba akhokele kwaye uyasebenza kwaye uyabaleka. Ngcono nangakumbi, awusoze uphelelwe zizinto ezinomdla wokuthetha ngazo kuba iGemini Abafazi baneengqondo ezibenza babe ngabadlali abafanelekileyo bemidlalo enje ngePrize. Ngamaqhekeza olwazi olumangalisayo, umntu wasetyhini waseGemini ugcina, ngokuqinisekileyo uya kwenza umhlohli okhethekileyo okanye utitshala.
Ujikelezwe kakuhle, uzolile, kwaye uyathandeka kwelinye icala lokudlulela, umfazi oGemini ojamelene nokugqithisileyo uye wakruquka yimeko ekuyo ngokulula. Xa ujongene nokudikwa, umntu wasetyhini waseGemini kunokwenzeka ukuba azifumanele ububi, kwaye unokuba noxinzelelo, uloyiko, okanye ade akhuphe uxinzelelo.
Ukuba owasetyhini wakho waseGemini uyakwazi ukwenza ukuba isithunzi sakhe silawulwe, unokungqina ukuba uyile. Usenokude abonakalise utyekelo lobugcisa: ukukhuthaza ezi mpawu kubalulekile njengoko kuyindlela yokuba umfazi wakho waseGemini azihlole, andise imilo yakhe, kwaye alawule uxinzelelo kunye noxinzelelo, ngemizamo yokuyila anokujongana nayo neemvakalelo indawo ekhuselekileyo, ukungabikho kwezinto ezinokumfaka ebubini.
Ngaba i-scorpio kunye ne-sagittarius ziyavana
Ekhaya, uMfazi waseGemini kunokwenzeka ukuba atshintshe isitayile sangoku sangaphakathi ngemixholo emitsha kraca, imibala kunye nempahla. Incasa yakhe yokuhombisa ayixhomekekanga kutshintsho lonyaka okanye lonyaka. Endaweni yoko, intle kakhulu ngalo lonke ixesha ubumnandi bakhe buchaza umxholo wokuhombisa. Ngothando lwakhe lobomi, umbala, kunye nentuthuzelo, uyakonwabela onke amathuba amangalisayo malunga noyilo lwangaphakathi.
Uqinisekisa ukuba kukho incwadana yokufunda encinci kuzo zonke iincwadi zakhe azithandayo, kodwa uya kuqinisekisa ukuba ikhaya liyindawo eyamkelekileyo kubahlobo kunye nosapho. Ukuhlala kwakhe ngokwasentlalweni usithembisa ukubandakanyeka kokutya okumnandi, amatheko, kunye namathuba okuhlala nanini na kwikhaya apho intloko yabasetyhini inguGemini.
Abafazi baseGemini bayathanda ukuxoxa ngayo yonke imiba yekhaya. Bayakuthetha ngendlela eqhutywa ngayo, beziva ukuba intetho evulekileyo inegalelo kwinzuzo enkulu kubo bonke abahlala phantsi kophahla olunye. Ukuba uhlala ethetha kakhulu, le yinto ayicingayo kwaye akakhange ayithathe kwaye ufuna umntu oza kwamkela ilizwi lakhe njengenye yokungenisa elizweni. Qiniseka ukuba uyayilungiselela into ayithethayo xa ethetha. Lo ngumfazi ongayi kuhoywa ixesha elide, ubuncinci ngaphandle kwesiphumo.
Ngemfuno eqhubekayo yencoko okanye ubumdaka obuqinisekileyo, ayothusi into yokuba ulawulo lwe-anatomiki lweGemini lubandakanya imiphunga, i-bronchi, i-trachea, i-thymus gland kunye nokuphefumla. Uphawu lukwalawula ngaphezulu kwehumerus (ithambo lengalo ephezulu), iscapula (igxalaba), kunye neentambo zezwi. Olu phawu luphindwe kabini lunomdla wokuba nesifo esingaphezulu kwesinye, ngenxa yoko ukungaziphathi kakuhle kumfazi waseGemini kuphezulu. Abafazi baseGemini banokufumana imeko yokuphefumla, kunye nemicimbi yezempilo echaphazela umqala, ukuphefumla, kwaye kwezinye iimeko, imiba yengqondo enxulumene noxinzelelo, ukungazinzi, okanye ukoyika kuvela.
Ngokumalunga nokukhetha amakhondo omsebenzi, uMfazi waseGemini unokuzabalaza ukuba aphume ngomsebenzi omnye. Endaweni yoko, unokutshintsha imisebenzi ade azive esebenza emsebenzini awuthandayo: Umsebenzi apho anokuvuka khona kusasa kwaye kunganyanzelekanga ukuba urhuqe impundu yakhe ebhedini kwaye uzinyanzele ukuba aye yonke imihla. Apha ubuhlobo, ubukrelekrele, ubukrelekrele, kunye nokuziqhelanisa nokwenza ukuba kube lula kuMfazi waseGemini ukuba asuke komnye umsebenzi aye kolandelayo.
Ngobuchule bakhe obukhulu kunxibelelwano, kungenzeka ukuba umsebenzi wakhe uza kugxila kule ndawo. Olunye ukhetho lomsebenzi lunokubandakanya ukusebenzela inkonzo yefowuni, ukuba ngumhlohli okanye utitshala, igqwetha, ugqirha, umcebisi, kunye nomdla wakhe ngokugqithileyo unokufumana ukuba unomdla kwiimeko ezichaphazela ingqondo, ezinje ngengqondo okanye isifo sengqondo. Abafazi baseGemini nabo babalasele ngezandla zabo, kwaye benza abapeyinti abagqwesileyo, abakroli bemifanekiso eqingqiweyo, izixhobo ezisebenzisa izixhobo zokwenza izinto, imijelo yogutyulo, abayili bemizobo, abayili bangaphakathi, kunye nokunye okunjalo.
Kwangelo xesha, incasa yabo entsha, enika umdla, kwaye engaqhelekanga inokubenza babe nomdla kubugcisa bokukhohlisa kunye nokukhohlisa kobugqi bezandla. Okokugqibela, ukuguqula iitalente zabo zokuncokola zibe yingoma nomculo kubenza babe ziimvumi ezifanelekileyo, iimbongi, ababhali beengoma kunye neemvumi.
Ukuba ujonge ukuba nomtsalane kumfazi waseGemini, kuya kufuneka uzele yimincili, ubhetyebhetye, ubhetyebhetye, kwaye uhambe ngokulula. Uyakufuna ukumgcina ngokufaka iinguqu rhoqo kwiindawo eziqhelekileyo zobudlelwane. Abafazi baseGemini bayadika ngokukhawuleza. Kufuneka babe namava otshintsho xa kuthelekiswa nokuma: Ingathi yimiphefumlo etsala kuko konke okuhambayo, okushukumayo, NOKUPHILAYO. Yile ntshukumo ebenza bazive besaphila. Yile nto bayinqwenela nanini na xa kubonakala ngathi bakhutshiwe kwenye into enomdla wokukhangela ulonwabo, ulonwabo kunye nokutsha.
Qiniseka ukuba awuhambi ngendlela yesiqhelo, okanye kunokwenzeka ukuba abaleke. Iifilimu ngenye imini, isidlo sangokuhlwa enye, ipaki yomxholo enye, kunye nohambo lokugxumeka inkampu kwindawo elandelayo-yitshintshe kwaye uya kumgcina ebandakanyekile. Into yokugqibela ofuna ukuyenza kukuqikelelwa: Ukuhamba ngokukhawuleza kuhamba umgama omde kunye neGemini Woman.
Mxelele ukuba mhle. Mncome rhoqo. Mbonise ukuba uyayazi engqondweni indlela azikhathalela ngayo: Ukuba uthandana nawe, kunokwenzeka ukuba uzama ukukubonisa, ubuncinci! Uyakunyibilika xa uqhubeka udlala ngothando nawe! Owu, kwaye ukudlala nzima ukufumana rhoqo akusizi; Uya kuba yinto enqabileyo, kwaye uyakuvuyela ukuthatha umkhondo wokukusukela. Okokugqibela, musa ukulibala ukumenza ahleke rhoqo; uburharha bakho yeyona asethi yakho inkulu, ngakumbi nale nkosi incoko kunye nobukrelekrele, umfazi ocinga.
Ukuncokola, ukuncokola, kunye nefilosofi okanye iingxoxo ezixhokonxa iingcinga zezona zitya ziphambili kumfazi waseGemini. Ukuba nosapho kunye nomhlobo omngqongileyo kunye nokuzimasa iminyhadala yoluntu lolunye ulonwabo kumfazi ozelwe phantsi kwalo mqondiso. Uyayonwabela inkululeko yakhe, inkululeko, ukuhamba, ukufunda, kunye nokucinezela ngonaphakade imida yokubona ukuba angaya phi. Umfazi waseGemini naye uthanda ukuzicela umngeni wokuba aqhubele phambili kunakuqala kuyo nayiphi na inzame ayenzayo. Uthanda abantu bokwenyani, abanyanisekileyo, abahamba lula kunye nomoya okhuthaza inkululeko, ukucinga ngokukhululekileyo, kunye nokuqondwa kwendawo yakhe.
Umfazi waseGemini, nangona ethanda ukugqitha, akakhathali kukubona abanye bethambekele kwiindidi ezifanayo zokubaxwa. Kunjengokuba efuna indawo ezinzisayo ebomini bakhe. Kwaye nje ukuba afezekise ibhalansi, ulwalamano ixesha elide. Ukuba uyinyani, unganyanisekanga, okanye unganyanisekanga, uMfazi waseGemini onobulumko bonke uya kubona ngqo ngawe. Uyabamkela ubufutshane beli xesha lobomi. Uyazi ukuba kubaluleke kangakanani ukuba kungabikho nkcitho kubantu abangafuniyo ukwala ukudlula ngaphaya kwezabo izithintelo abazimiseleyo zokukhangela ulonwabo iintliziyo zabo eziqhubeka nokunqwenela. Akabuthandi ubundlongondlongo, ukuxoka kunye naluphi na uhlobo lobudlelwane olusongela ngokuthatha inkululeko yakhe.
Umdlalo oGqibeleleyo woMfazi waseGemini
Umfazi waseGemini wakha ubuhlobo ngokukhawuleza kwaye ngokukhululeka okukhulu: Kuba bathambekele ekugqithileni kwiimvakalelo nasekucingeni, banokubhenela kubaphulaphuli babahlobo ukuze isiseko sakhe sokuqala sabahlobo sibonakale sikhulu kunoninzi. Yigcine engqondweni into yokuba abahlobo bathathela ingqalelo abo baqheleneyo kunye nabo baqwalaselwa njengeeesties ngamaqela amabini ahlukeneyo ngaphakathi kwengqondo yowasetyhini waseGemini, oya kuthi abonakalise unxibelelwano olunzulu kunye neqaqobana labahlobo bakhe abasondeleyo.
Njengomntu ofikisayo, unokubonakala ngathi uyabhabha okanye uyaxakaniseka njengoko ehlola imida kwaye efumanisa ukuba ungubani kwaye ufuna ukuba ngubani. Ubukrelekrele, umntu ocinga ukuba uzama kwaye uyinyani, wenza umfundi ogqwesileyo kwaye uyavana nabantakwabo okanye abo afunda nabo / oontanga kakuhle, nangona ngamanye amaxesha angangqubana nePisces okanye iScorpio ilawule umntakwabo, konke, uhlala esondele kusapho olusondeleyo amalungu.
Ukuba ufuna ukuhlala ungumhlobo nomntu obhinqileyo waseGemini, kufanelekile ukuba ube yinyani, uthembeke, kwaye unyaniseke. Akuzukuthatha thuba lide ukuba akhule engathandekiyo kwaye aqhubeke nenye into ebhetele. Uyakhumbula ukufaniswa kwebhathane? Iphunga elinye lesivunguvungu somoya kunye nebhabhathane liyokufumana indawo emnandi ngakumbi nekhuselekileyo.
Ulawulwa luphawu oluguquguqukayo lwe-zodiac, ke uhlengahlengisa kakuhle, kodwa loo nto kuphela ukuba ufuna nyani ukulungelelanisa. Owu, kwaye ngendlela, eli bhabhathane ngokwenene loluntu, ke kuyakufuneka ukulungele ukwabelana nabanye abahlobo! Akayi kuwunyamezela umona phakathi kwabo abathandekayo.
Ngelixa uphawu lweGemini lumele imikhosi ephikisayo, uphawu lweLibra lumele ibhalansi yemikhosi enjalo. Ke, uMqondiso weLanga ngowona ulungileyo wokuzisa iGemini kunye kunye nentsika exhasa uzinzo olungeleleneyo lomntu ozelwe phantsi komqondiso weGemini. Ukucinga kwangaphambili, u-Aquarius oqhubela phambili wenza iqabane elikhulu leGemini kuba uAkarius ngulawulo lwenoveli, entsha kunye nokuyila:
Zonke izinto ezibonakala zinomtsalane kuMfazi waseGemini, kunye neeAries, kunye nesidingo sayo sentsha kunye nesenzo, zinokwenza iqabane elikhulu, ngakumbi kwisebe elinomdla. ILeos nayo inomtsalane kuye, ubuncinci ekuqaleni. Umtsalane ubangelwa yirali yereal yabo bazalwa phantsi komqondiso. Kodwa, ukufunwa rhoqo kwengqwalaselo uLeo anakho kunokukhokelela kwindlela eya kumona, ukungavisisani, kunye nokonakala kobudlelwane.
Ngelixa kunganyanzelekanga ukuba ungqubane, iCancer kunye neGemini azifanelanga ukuba zilungele. Umhlaza unokuba nomoya, ukhukhumale, kwaye kunzima ukuphuma kwigobolondo lomntu. Ngelixa iGemini ingekhoyo kwintyatyambo yodonga: Ubuhlobo obulungileyo ewe, kodwa ubudlelwane obukhokelela kuyo nayiphi na into yexesha elide kwezothando akunakulindeleka. IVirgo inokungqubana noMfazi waseGemini naye, ngakumbi xa efuna kakhulu okanye uzama ukumbopha ngokukhawuleza.
Umfazi waseGemini obalekayo, onomoya okhululekileyo, kwaye olungele ukuzula-zula emhlabeni okanye ofuna utshintsho oluqhubekayo akayonto yokulawula kwabasweleyo okubangelwa yiScorpio. Okubi nangakumbi, ukuba iGemini Woman etshintsha ngokukhawuleza inokubonisa ukufuna, kwinto enye, ngenye imini kunye nomnqweno wenye into elandelayo. Isenzo esiguquka ngokukhawuleza sinokubonakala ngathi sisithiyelo kwaye sitshintshele kwiqabane elilawulwa yiScorpio.
Xa kuthengwa isipho kuMfazi waseGemini, awuyi kuba nangxaki yokwenza njalo. Uyakuthanda ukufunda ke ukufunda yenye yezona zinto azithandayo. Mfumanele incwadi ethengiswa kakhulu mva kuhlobo aluthandayo okanye umazise kuhlobo aqhelene nalo; Nokuba yeyiphi na indlela, kuyamkholisa ukuba abe nenye incwadi aza kungena kuyo, kwaye ungamrhwebesha ngohlobo olutsha kuye.
Ukumnika ngokuzenzekelayo, 'kuba' izipho nangaliphi na ixesha lonyaka kuya kungqina ezona zipho uzikhumbuleyo. Ukuba uthenga 'ngesiqhelo' izipho nangawuphi na umsitho, ukutshintsha indlela osinika ngayo isipho kunye nokwenza umboniso waso ngendlela emangalisayo ngandlela thile kuya kuphumelela intliziyo yakhe. Umzekelo, endaweni yokumnika nje iteyiphu yothando uyibhale kwivili lokuqhuba. Okanye, pop kwezinye iibhaluni ezinomoya kunye neentyatyambo ezimbalwa ezinde esihlalweni sangaphambili semoto yakhe kwiiyure ezimbalwa ngaphambi kokuba avuke kusasa. Bukela ukubindeka kwakhe xa eyokungena emotweni aye emsebenzini! Yigcine ngokuzenzekelayo kwaye ingalindelekanga rhoqo!
Kwitempile yoothixo baseRoma, kukho uthixo ojongana nobabini uJanus. Ubuso obunye bujonge ngasekhohlo, obuhambelana nexesha elidlulileyo kunye nolunye ekunene okanye kwikamva. Unguthixo olawula ukuphela konyaka kunye nokuqala komnye, imida kunye nezinto ezizayo. Ngale ndlela, umntu obhinqileyo waseGemini ukwamalunga nokuba ngubani malunga nokubeka imida, ukuyihlola, kunye nokwaphula ngokuthanda kwakhe. IGemini yi-zodiac edibanisa ngokulula nakweyiphi na i-mythos apho kukho amawele. Umqondiso, ke ngoko, umi kwizinto ezidityanisiweyo kodwa ezichaseneyo: Amabali okwahlukana kweCastor kunye nePolydeuces, kunye namabali kaHercules kunye noApollo axhunyiwe kule zodiac.
Lo Mqondiso weLanga usenokunxulumana nebali lendlela uthixo wasezulwini wamaGrike kunye nomlawuli wee-12 iOlimpiki, uZeus, esoyika amandla okwenyani kunye namandla abantu, azisika iziqingatha. Ngokwentsomi yamaGrike, umntu wayekhe wangumntu omnye oneentloko ezimbini nemilenze emine. Ibali liqhubeka lichaza indlela esasikunqwenela ngayo ngonaphakade ukudityaniswa nesiqingatha sethu. Ibali lizama ukucacisa ukukhangela kwethu okungapheliyo kweqabane lethu, umphefumlo wethu, okanye impilo ngaphakathi kwethu.
KwiTarot, Abathandi bahambelana nomqondiso weGemini. Kwinqanaba leRider-Waite, uAdam noEva bema kwiGadi yase-Eden ngoMthi woLwazi lokuLungileyo nokubi. Esi sibini simele amandla obudoda nawomfazi kunye nobume bomqondiso weGemini. Ikwamele ukulangazelela ulwazi oluqhelekileyo kwabo bazalwe phantsi kwalo Mqondiso weLanga. Umqondiso weSanga unxulumene noMtyholi (xa amandla enefuthe elibi,) kunye neSuti yeeNkemba kwi-arcana encinci.
Ngomqondiso weGemini onxulumene nabathandi kwiTarot, akumangalisi ukuba umqondiso uhambelana no-Anahata okanye i-Heart Chakra. Umqondiso weSanga unxulumene neemvakalelo zazo zonke iidigri kunye nokugqitha. Inani lesihlanu linani elifanayo leGemini. Inani lifanekisela ukudityaniswa kwazo zonke izinto, umoya, kunye noAkasha: It, ke ngoko ibonisa ukuphelela.
Imihla yeGemini: Meyi 22nd-Juni 20
Glyph imvelaphi yegama lokuqala. Inani lamaRoma 'ezimbini' kunye negylph ibonisa iziqwenga ezibini zomthi ezibotshiwe.
IsiSanskrit: Mithuna, ethetha 'Ngababini.'
gemini umfazi kunye ne-libra man ukuhambelana
Ibinzana eliphambili: 'Ndiyacinga.'
Ulawulo lwe-anatomical: Amagxa, imiphunga, izandla, ikhola yomqala, iityhubhu ezinobungozi kunye neengalo
Ingelosi: Ingelosi eyintloko uRafael
Izilwanyana: Magpie, squirrel, Inyoka, Ihashe, Ibhabhathane, kunye nenja
Iphupha leArchetype: I-Anima kunye ne-Animus, isibini esingcwele, kunye nabathandi
Umgangatho wokulinganisa: Ukucinga nzulu, ukubonakalisa ngaphakathi, kunye nesenzo
Iintaka: Iiparrothi, iiFinches kunye neeXhalanga
Amatye okuzalwa: I-Pearl, i-Agate, iTourmaline, kunye neTopazi.
Umthi weCeltic wenyanga: I-Hawthorn (ngoMeyi-13 ukuya kuJuni 9) kunye ne-Oak (nge-10 kaJuni- nge-7 kaJulayi)
Intsingiselo yoMthi weCeltic: I-Illusionist kunye neLomeleleyo.
Chakra: Anahata okanye 'Intliziyo Chakra.'
Iwele lamaTshayina leZodiac: Ihashe
Ukuhambelana: ILibra kunye neAquarius
Ingxaki: Sagittarius okanye Pisces
Ukuphakanyiswa kwePlanethi: INorth Node
Izithixo Zabafazi: UArtemis, Bast, Sekhmet, Isis noNephthys, kunye noFreyja
Intyatyambo: ILavender kunye neLily yeNtlambo, iIris, iSnap Dragon, kunye neeOrchids.
I-pisces indoda kunye neepisces zesini sabasetyhini
Isini: Indoda, eqinisekileyo, yeProjekti
Ukuphilisa Amakristali: I-Agate, i-Emerald, iTiger eye, iPeridot, iCitrine, i-Aquamarine, iDayimane, iJade, i-Iceland Spar, i-Onyx, iPeridot, iTopazi kunye neTourmaline
Amakhambi: IMarjoram, iVervain, iLemon Verbena, iParsley, iliso leLiso, iLemon Ingca, iFennel, iDill, iGladioli
Igama elingundoqo: 'Unxibelelwano' kunye nokubhekisa kuzo zonke iintlobo zonxibelelwano kubandakanya ukubhala, ukuthetha, kunye nengcinga.
Izithixo zamadoda: UApollo, uDionysus, uLoki, uMercury, uJanus, uCastor noPollux, noHermes; kananjalo, nguZeyus malunga nokwahlulwa omnye abe babini.
Isinyithi: IMercury / Quicksilver, iPlatinam kunye neAluminiyam
Oyile: Jasmine, Mastic, Orchid okanye iSandalwood
Impembelelo kwiplanethi: Imercury
Imibala yokuqala: Mhlophe, mthubi, no-orenji
Imibala yesibini: Luhlaza okwesibhakabhaka, mhlophe o-orenji, namthubi
Isidingo saseprayimari: Unxibelelwano kunye nokwabelana ngolwazi
Ivumba: Umhlonyane, iSandalwood, uJasmine
Umbutho wamaxesha: Ntlakohlaza
Imibutho yeTarot Card: Abathandi, uMtyholi (xa amandla echaphazeleka kakubi,) kunye neSuti yeeNkemba kwi-arcana encinci.
Imithi: 'Mdala yiba nguMthi weLady.'
Abantu abadumileyo: UAngela Jolie, uNahomi Campbell, uMarilyn Monroe, uNicole Kidman, kunye noNatalie Portman.
iphepha leewands ngendlela umntu akubona ngayo
Scorpio indoda kunye nomtshato womfazi we-sagittarius
scorpio indoda nomfazi othandweni